Home » News na ụgbọ elu » Premier Jets onwe ya nwetara Oakland Air FBO na Oakland County International Airport
Ihe nnweta ahụ na-eweta ụgbọ mmiri nke Premier na 14 ma gbasaawanye ikike ha na mpaghara mmezi
Oakland Air bụ FBO ọrụ zuru oke, ụgbọelu ikuku na ọdụ nrụzi enyere na Oakland County International Airport
A ga-edegharị ụlọ ọrụ PTK Premier Jet Services
Ntinye aka Premier n'ime ogige FBO ga-eme ka ha nwee ike ijikwa ịzụta mmanụ na mkpa nlekọta ụgbọelu abalị
Premier Private Jets, ụlọ ọrụ ụgbọelu nke Part 135 nke dị na Stuart, FL, enwetawo Oakland Air, FBO na-arụ ọrụ, ụgbọelu ikuku na ebe nrụzi edozi na Oakland County International Airport. Ihe nnweta ahụ na-eweta ụgbọ mmiri nke Premier na 14 ma gbasaa ikike ha nke ọma na mpaghara mmezi. A ga-edegharị ụlọ ọrụ PTK Premier Jet Services.
"Obi dị anyị ezigbo ụtọ na nnweta a, nke mbụ n'ime ọtụtụ ndị anyị na-atụ anya na-eme ka anyị na-agbasa akara ụkwụ Premier na mba ahụ," ka Josh Birmingham, Onye isi nchịkwa nke Premier Private Jets. Nnweta a ga - eme ka ụgbọ mmiri anyị ndị na - ese n’elu mmiri gbasaa na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke United States. Anyị kwenyere na anyị nwere ike ịnapụta ndị ahịa ọrụ karịa ka ọ dị ọnụ ala site na ịpụta ọrụ dị mkpa na arụmọrụ anyị, nke a bụ nke mbụ n'ime ọtụtụ usoro anyị ga-eme ka anyị na-eto ụdị azụmaahịa a na-atọ ụtọ ma na-agbasawanye.
Ntinye aka Premier n'ime ogige FBO ga-eme ka ha nwee ike ijikwa ịzụta mmanụ na mkpa nlekọta ụgbọelu abalị. Site n'ụgbọ elu nke gbadoro ụkwụ na ọdụ ụgbọ elu ndị elebara anya maka njem azụmahịa na oge ezumike, Premier na-enye nzaghachi ngwa ngwa na usoro ndị ahịa ma na-enye ọnụahịa asọmpi site na arụmọrụ.
"Premier Jet Services FBO ika na-enye anyị ohere iji chịkwaa ahụmịhe ụgbọelu ndị ahịa ikuku site na ala," Birmingham kwuru. "Anyị na-atụ anya inweta FBO ọzọ ma ugbu a na-achọ ohere ọhụụ."
Na mgbakwunye na ịkwado arụmọrụ nke Private Jets, FBO ọhụrụ enwetara ga-agbasawanye iji dọta ndị nwe ụgbọ elu onwe ha na ndị ọrụ ndị ọzọ na Pontiac na mpaghara ndị gbara ya gburugburu. Companylọ ọrụ ahụ na-ezube ime ka ụlọ ọrụ ndị njem njem ya dị ọhụrụ na PTK tinyere ọnụ ụlọ ọhụụ ọhụrụ, nke zuru oke na usoro nyocha nke ikuku nke nwere ike ịgbachitere nje dị ka COVID-19. "Obi dị m ụtọ banyere atụmatụ anyị iji wuo FBO nke klaasị ụwa, nke zuru ezu na nri ụgbọ elu na ebe a na-ere kọfị, yana ịbụ onye mbụ na-enye mmanụ ụgbọ elu na-adigide (SAF) maka ụgbọ elu niile na-eji Oakland County International Airport," Birmingham kwubiri.